Khilaafka Farmaajo iyo Rooble: 4 arrimood oo xal u noqon kara ismaandhaafka madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha - Bulsho News
Maxaa ka jira ‘inuu dhintay’ Mullah Abdul Ghani Baradar?
RW Rooble oo Awaamiir adag dul-dhigay Wasaaradda Maaliyadda
QM: Ugu yaraan 350,000 oo rayid ah ayaa...
Ganacsiga magaalada Wajeer oo maalintii labaad xiran
Taalibaan oo meydadka dad ay dileen ku soo...
Booliska Gabiley oo xiray weriye Maxamed Cabdi Cumar
Militariga Sudan oo sheegay inay iska caabiyeen ciidamada...
20 qof oo cudurka COVID-19 ugu geeriyooday Jubada...
Wicitaanka Dhageystaha: Xogta muranka badda ee Soomaaliya iyo...
Midowga Musharaxiinta oo dalbaday in la dedejiyo doorashada
Dib U Eegid: Waa Maxay Rikoodhka Ay Man...
Shaxda Rasmiga Ah Ee Brentford Vs Liverpool: Alexander-Arnold...
Thomas Tuchel: Man City Way U Qalantay In...
Taageerayaasha Premier League Oo Ka Maadsaday Bruno Fernandes...
CIYAAR WAALI AHEYD Liverpool oo lagu celiyey bar...
Xaqiiqooyinka Laga Diwangaliyay Kulankii Waalida Ahaa Ee Ay...
Shaxda Laga Yaabo In Ay Arsenal Kaga Hor...
Chelsea Oo Go’aan La Yaab Leh Ka Gaadhay...
Atletico Madrid Oo Arsenal Ka Arkootay Badalka Saul...
Khilaafka Farmaajo iyo Rooble: 4 arrimood oo xal u noqon kara ismaandhaafka madaxweynaha iyo Ra'iisul Wasaaraha
Khilaafka Farmaajo iyo Rooble: 4 arrimood oo xal u noqon kara ismaandhaafka madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha
by 2 weeks ago 2 weeks ago
Xigashada Sawirka, SNTV
Maxkamadda dastuurka kama jirto Soomaaliya, taasoo ahaan lahayd meesha kaliya ee xal looga raadin karo ama go’aan ka gaari karta khilaafka madaxda ugu sarreysa dalka.
Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayuu u dhaxeeyaa khilaaf aad usoo shaac baxay isbuucan oo kusoo aaday xilli lagu dadaalayay inay qabsoonto doorashada waqtigeeda ka dib dhacday.
Arrimaha ay isku qabteen Farmaajo iyo Rooble waxaa saldhig u ah:
Qaabka loo wajahay kiiska ku saabsan Ikraan Tahliil, oo xubin ka ahayd sirdoonka Soomaaliya
Shaqo ka joojinta agaasimihii hay’adda Nabad sugidda, Fahad Yaasiin
Xil ka qaadista wasiirkii amniga gudaha oo wasaaraddiisa loo magacaabay qof kale
Ikraan ayaa la la’yahay tan iyo dabayaaqadii bishii June. Hay’adda NISA ayaa dhawaan sheegtay in gabadhaas ay dileen kooxda al-Shabaab. Hase yeeshee ehelada gabadhan ayaa sirdoonka ku eedeeyay inay mas’uul ka yihiin maqnaashaha Ikraan.
Xigashada Sawirka, Social Media
Waxaa jirtay dacwad laga gudbiyay Fahad iyo howl wadeennada ka hoos shaqeynayay, taasoo ku saabsaneyd sida ay u maareeyeen arrinta Ikraan Tahliil.
Tallaabadii uu Ra’iisul Wasaaraha shaqada uga joojiyay Fahad ayuu kasoo hor jeestay madaxweynaha, isagoo markii dambena sheegay inuu u dallacsiiyay xilka la taliyihiisa amniga qaranka.
Dhanka kale xil ka qaadista wasiirka Amniga, Xasan Xundubeey Jimcaale ayaa la hadal hayay inay salka ku heyso isla mowduucan.
Wasaaradda amniga ayaa u muuqata mid labo wasiir ay ku lug leeyihiin, maadaama wasiirka xilka laga qaaday uu sheegay inuu howshiisa wato halka kii la magacaabayna loo dhaariyay isla xafiiskaas.
Isku dhaca Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha ayaa abuuray xiisad iyo walaac soo wajahay shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka.
Wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan marxaladdan ayaa sheegayay in uu fashilmay dadaal lagu doonayay in la isugu soo dhaweeyo labada mas’uul, oo ay wadeen qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida.
Waxaa natiijo la’aan ku dhammaaday shir saacado badan qaatay oo u dhaxeeyay Farmaajo iyo Rooble oo ay hormuud ka ahaayeen siyaasiyiin ay ka mid yihiin madaxweyneyaasha Galmudug, Maxamed Cabdi Kaariye “Qoor Qoor” iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed, Cabdicasiis Xasan Maxamed “Laftagareen”.
Dad xog ogaal ah ayaa BBC-da sheegay in arrinta taliyayaasha ay labada mas’uul u kala magacaabeen hay’adda sirdoonka iyo kiiska Ikraan Tahliil ay yihiin qodobada ugu adag ee la isku fahmi waayay.
Ma cadda in dadaalka waanwaanta uu sii socon doono iyo in kale, mana jirin tallaabooyin kale oo ay labada dhinac qaadeen.
Muxuu noqon karaa xalka?
Madaxweyne Farmaajo ayaa goor sii horreysay u xil saaray Ra’iisul Wasaaraha inuu hoggaamiyo hannaanka doorashada iyo amniga.
Hadda waxa uu sheegay in Ra’iisul Wasaaruhu uu leeyahay ooo kaliya talo soo jeedin balse uusan xil ka qaadi karin wasiir, s waafaqsan dastuurka ku meel gaarka ah.
1- In aan wasiir xil laga qaadin
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya, Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa BBC-da u sheegay in xalka labada dhinac isu soo dhaweyn kara uu yahay oo kaliya in meesha laga saaro tallaabada wasiir xilka looga qaaday balse taas baddalkeeda la sameeyo isku shaandheyn, iyadoo wasiirka la baddalo loo dhiibayo wasaarad kale.
“Waxyaabaha yar yar ee la isku hayo waa la toosin karaa. Aniga kuma taliyeen saacaddan in wasiir la baddalo, laakiin Ra’iisul Wasaaruhu wuxuu awood u leeyahay in haddii uu shaqada amniga ku aamini waayay Xundubeey u dhiibo wasaarad kale,” ayuu yiri Cabdiwali Gaas.
Fikraddan waxaa ku raacsan Barfasoor Cabdi Ismaaciil Samatar, oo falanqeeya siyaasadda gobolka.
2- In qof saddexaad loo magacaabo agaasimaha NISA
Sidoo kale arrinta ku saabsan hoggaanka NISA ayay sheegeen in dhan kale laga eegi karo.
“Haddii la leeyahay Fahad wuu is casilay, madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaruhuna ay kala magacaabeen labo qof waxaa habboon in la isku afgarto qof saddexaad oo aan labadaas midna ahayn,” ayuu yiri Ra’iisul Wasaarihii hore.
3- Baaritaanka kiiska Ikraan Tahliil
Qodobka uu ka dhashay muranka ugu weyn ayaa ahaa kiiska gabadha ka tirsaneyd Hay’adda Sirdoonka qaranka, walina wax xal ah looma helin.
Sida ay khubaradan qabaan, “waxaa muhiim ah in baaritaan habboon lagu sameeyo sida lagu waayay gabadhaas oo xil sare ka heysay NISA”.
4- Dadaalka Beesha Caalamka
Xalka kale ee ugu dambeeya waxa uu noqon karaa in Beesha Caalamka ay si toos ah u soo farageliso arrinta, sida uu aaminsan yahay Barfasoor Cabdi Ismaaciil Samatar.
“Waxaan ogeyn in bishii April ay dhaceen rabshado ka dhashay khilaafkii Mucaaradka iyo dowladda, beesha caalamkuna waxay cadaadis ku saartay dhinacyada inay xal helaan,” ayuu yiri.
Maalmihii lasoo dhaafayba waxaa socday dadaal ay dalalka saaxiibka la ah Soomaaliya ugu jireen in laga gudbo ismariwaaga siyaasadeed, si xoogga loo saaro arrimaha doorashada.
More From: Wararka maanta
QM: Ugu yaraan 350,000 oo rayid ah ayaa ku dhintay dagaalka Suuriya
by Bulsho Media 11 hours ago 11 hours ago
Taalibaan oo meydadka dad ay dileen ku soo bandhigay meel fagaare ah
Militariga Sudan oo sheegay inay iska caabiyeen ciidamada Ethiopia
20 qof oo cudurka COVID-19 ugu geeriyooday Jubada Hoose
Afghanistan: Talibanka oo la wareegay 3 magaalo oo...
Xabsiga Koonfur-Galbeed oo xariga laga jaray
Juventus Oo Ka Hadashay Wararka La Xidhiidhinaya Paul...
Gudoomiyihii deegaanka Garasbaaley oo Qarax Miino lagu dilay
Man charged with murder of woman and three...
Xasan Xundubey oo si yaab leh ugu ciil...
Why Greece’s expensive new migrant camps are outraging...
Odayaasha beelaha HAWIYE oo soo saaray DIGNIIN ku...
Xiddig Muhiim U Ah Chelsea Oo Seegi Doona...
Biden argues critics of $3.5 trillion budget proposal...
Daawo: Muxuu Rooble ku sheegay khudbaddii uu maanta...
Hirshabeelle: Seddex Kamid ah Kuraasta Aqalka Sare Oo...
Taliyaha AFRICOM oo booqday Saldhiga Danab ee Bali-doogle
‘Hopefully win the league’ – Martin Odegaard backing...
Can kids be harmed wearing masks to protect...
Ronald Koeman Oo Kashifay Marka Uu Ka Tagi...
Farmaajo oo war kasoo saaray geerida Suldaan Cumar